RW Khayre Oo Guddoomiyay Shirka Amniga Magaalada Dhuusameeb - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > RW Khayre Oo Guddoomiyay Shirka Amniga Magaalada Dhuusameeb
RW Khayre Oo Guddoomiyay Shirka Amniga Magaalada Dhuusameeb
August 3, 2019 admin307
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda Federalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyey shirka amniga Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo ay ka qayb galeen dhammaan hay’adaha amniga heer federal ee lagu wareejiyey Amniga magalaada
Shirka ayaa aad looga hadlay Qorshaha sugida amniga caasimadda caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb, Diyaar garowga sugida amniga shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug, Amniga garoonka diyaaraha Dhuusamareeb iyo sidoo kale Dardar-gelinta qorshaha xoraynta deeganada Galmudug ay Alshabaab uga suganyahay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhammaan hey’adaha ku shaqada leh amniga waxa uu faray in iyaga oo wadajira ay kalsoonida bulsahda sare loo qaado, sida ugu habboon uga soo baxaan mas’uuliyadda weyn ee loo dhiibay si ay guul ugu dhamaadaan qorshaha lagu dhisayo hey’adaha dowladeed ee Galmudug.
Laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si rasmi ah ula wareegeen sugidda amniga magaalada Dhuusamreeb ee caasimadd dowlad gobaleedka Galmudug.
Taariikh Nololeedka Eng. Cabdiraxmaan Yariisow
Isbadal lagu sameeyey Taliska Qeybta 21aad.
(Sawirro) Ole-ole Nadaafadeed oo ka socda Godinlabe.
Khayre”Dadka diidan Horumarka Dalka waxay Saaxiib la yihiin 27-kii sano ee lasoo Dhaafay
December 4, 2017 Cali Yare